घरमा यस्ता टुटेफुटेका सामान राख्नाले नकारात्मक उर्जा बढाउँछ, थाहा पाइराख्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
बास्तु दोष भयो भने घरपरिवारमा आर्थिक संकटसम्बन्धी समस्याहरु आउने गर्छ । त्यतिमात्र होइन पारिवारीक माहोल पनि खटपट हुने, सधैँ असफल हुने कारण पनि बन्न सक्छ ।
बास्तुको अनुसार घरमा टुटेफुटेका सामान राख्दा नकारात्मक उर्जा पैदा हुन्छ । यसका साथै आर्थिक रुपमा हानी नोक्सानी हुने गर्छ । यति मात्र होइन घरमा भएका अनावश्यक टुटेका फुटेका सामानले मानसिक तनावको कारण पनि बन्ने गर्छ ।
भान्साकोठामा पुराना भइसकेका र टुटेफुटेका भाँडाकुँडा राख्दा महालक्ष्मी अप्रसन्न हुने र घरमा दरिद्रताका साथसाथै आर्थिक हानी हुने गर्छ ।
बास्तुको अनुसार घरमा चल्न छोडेको वा बिग्रिएको घडी घरमा राख्नु अशुभ मानिन्छ । यसले परिवारको सदस्यको उन्नति हुन रोक्छ । साथै, यसले घरमा नकारात्मक उर्जा पनि फैलाउँछ ।
फुटेको, चर्केको वा ऐनाको टुक्रा बास्तुको अनुसार एकदमै ठूलो दोष हो । यसले घरमा नकारात्मक उर्जा सक्रिय गराउँन मद्दत गर्छ । जसले गर्दा परिवारको सदस्य मानसिक तनावको सामाना गर्नुपर्छ ।
यदि तपाईंको वैवाहिक जीवन सधैँ सुखद बनाउँन चाहानुहुन्छ भने घरमा भएको पलङ वा खाट भाँचिएको हुनुहुँदैन । यदि सुत्ने विस्तारा भाँचिएको छ वा टुटेको छ भने वैवाहिक जीवनमा तनाव सिर्जना हुन्छ ।
घरमा राखिएको तस्बिरका फ्रेम पनि फुटेको वा चर्किएको छ भने तुरुन्तै हटाइदिनुपर्छ । च्यातिएको र यस्ता फुटेका तस्बिर राखेमा घरमा परिवारकोबीचमा मतभेद पैदा हुन्छ ।
घरभित्र छिर्ने ढोका वा गेट टुटेको छ भने अशुभ मानिन्छ । यसबाट घरमा नकारात्मक उर्जा गर्छ ।
बास्तुको अनुसार घरमा टुटेफुटेका फर्निचर राख्दा अशान्ति फैलन्छ ।
Don't Miss it गर्मीमा शितलता प्रदान गर्ने दहीको के-के छ फाइदा जानिराख्नुहाेस्
Up Next किन आउँछ डकार ? जानीराखौँ यसका कारण र बच्ने उपाय
कुन राशि भएकासँग विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ ? कुनै व्यक्तिको प्रेम प्रतिको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? राशिअनुसार जान्नुहोस्
जीवनको कुनै न कुनै समयमा मानिस प्रेममा पर्छ । प्रेम नितान्त निजी विश्वासमा आधारित हुने कुरा हो । प्रेमबारे मानिसका…
टाउकाे दुखेकाे ठिक पार्न अपनाउनुहाेस् यी उपायहरू
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रायः मानिसले आफ्नो जीवनमा एक या एकभन्दा बढीपटक टाउको दुखाइको समस्या भोगेका हुन्छन् । टाउको दुख्नुका…